Guddiga Farsamada Hirshabeelle oo gaaray Jowhar + Sawiro | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Guddiga Farsamada Hirshabeelle oo gaaray Jowhar + Sawiro
Guddiga Farsamada Hirshabeelle oo gaaray Jowhar + Sawiro
Guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka 2-aad ee Hirshabeelle ee uu dhawaan magacaabay madaxweyna dowlad goboleedka hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle.
Xubnaha guddiga ayaa markiii ay gaareen jowhar waxaa kusoo dhaweeyay Masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida.
Guddoomiye ku xigeenka siyaasada gobalka shabeellaha dhexe Maxamed Cabdi Sheikh Xandow oo ka mid ahaa masuuliyiin soo dhaweeyay ayaa waxa uu sheegay inay ku faraxsanyihiin waxaana sidoo kale uu ugu baaqay in si hufnaan leh ay uga shaqeeyaan arrimaha loo ekmaday ee ah soo xulista barlamaanka 2-aad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Afhayeenka guddiga Siyaad Maxamed Isaaq ayaa ka mahadceliyay soo dhawenta looga sameeyay waxaana uu sheegay in maalmahan soo socda ay soo saari doonaan jadwalka shaqo ee soo xulista baarlamnaka 2-aad ee Hirshabeelle.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waree ayaa 29 bishii lasoo dhaafay ee agoosto magacaabay guddigaan farsamada soo xulista barlamaanka labaad ee Hirshabeelle kuwaasi oo ka kooban 11 xubnood.
Maqaal horeSawirro: Mursal Oo guddoomiyay kulanka guddiga joogtada ee G/Shacabka
Maqaal XigaRa’iisul wasaare Rooble: Waxaan soo dhisi doonaa Xukumad Tayo leh